ngu admin nge 20-07-15
1. Ukunqongophala kwezixhobo zokubona i-nucleic acid kuya kuba yingxaki yehlabathi. 2. Amashishini e-IVD aseTshayina anamandla okuya phesheya kwaye akhuphisane namashishini akumgangatho wehlabathi. I-3, i-chaos ye-reagent yokuvavanya imarike, inyathelo elisemthethweni lokulawula iziyobisi! Amashishini amaninzi e-IVD afumene i-fir...
ngu admin on 20-07-14
Ngomhla wama-21 ku-Epreli, iLabCorp, inkampani yezesayensi zobomi, yabhengeza kwiwebhusayithi yayo esemthethweni ukuba ifumene uGunyaziso lokuSebenzisa oluNgxamisekileyo lwe-FDA yeNoveli ye-Coronavirus Test Kit ekhoyo ekhaya. I-AT-Home Test Kit, enokusetyenziswa ukuqokelela iisampuli zovavanyo eKhaya, ivumela abantu ukuba bathumele ...
I-Reay Tech iphumelele ukuya kwiMEDICA Dusseldorf ngo-2019
ngu admin on 20-06-28
I-Reay Tech iphumelele ukuya kwi-FIME Miami ngo-2019
Umboniso wokuqala kuNyaka oMtsha- i-Hangzhou Realy Tech iseti Ukuhamba ngenqanawa ukusuka eDubai
I-MEDLAB kuMbindi Mpuma oququzelelwe yi-Informa, omnye weyona mboniso ibalulekileyo kwintsimi ye-IVD yabanjwa ngomhla wesi-3 kuFebruwari ukuya kwi-6 kaFebruwari, ngo-2020 kwiZiko loRhwebo lweHlabathi laseDubai, e-Emirates. Lo mboniso utsale ababonisi abangaphezu kwama-600 abavela kumazwe angaphezu kwama-40. Malunga ne-500 yecandelo lezonyango zeLaborat...